Maraoka : Nosamborina ilay bilaogera Bachir Hezzam · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2019 4:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, English
(Tamin'ny volana Desambra 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra voalohany)
[Fanavaozam-baovao ny 15 Desambra (2009) : Nomelohina sazy mihatra efa-bolana an-tranomaizina sy handoa onitra mitentina 500 Dirham i Bachir Hezzam. Voaheloka higadra herintaona an-tranomaizina ihany koa ilay tompona cybercafé ary nandoa onitra mitentina 500 Dirham] .Nosamborina ny 8 Desambra 2009 ilay bilaogera Maraokana Bachir Hezzam, rehefa namoaka an-tserasera tao amin’ny bilaoginy ny fanambarana an-gazety momba ny fifandonana nandritra ny fihetsiketsehana nitranga tany Tarjijt, izay nahitana ny fifandonan’ny polisy sy ireo mpianatra. Nanontaniana momba ny asa ataony ao amin’ny bilaoginy izy, indrindra tao amin’ny lahatsoratra nataony farany, izay nisy ireo sonian’ny komitin’ny mpianatra efa nosamborina koa.
Nosamborina i EI Bachir Hezzam, mpianatra literatiora, 26 taona, nogadraina tao amin’ny efitra mitokana aloha izay vao nampiarahana tamin’ireo gadra hafa tao am-ponja.
Araka ny voalazan’ny Filohan’ny fikambanan’ireo bilaogera Maraokana, naraha-maso daholo ireo toerana cybercafé tao an-tanandehibe mba hanakanana ireo mpisera Aterineto tsy ho afaka hampiely vaovao momba ity tranga ity, ary hisorohana ny korontana. Nosamborin’ireo manampahefana ihany koa ireo olon-kafa noahiahiana nandefa vaovao momba ny hetsi-panoherana, anisan’izany ny mpiasa iray tao amin’ny cybercafé iray nanana taratasy filazana sy ny peta-drindrin’ilay hetsi-panoherana.
Fantatra fa niakatra fitsarana i Bachir Hezzam ny Alatsinainy 14 Desambra 2009.
4 herinandro izayBahrain